How to know if you're depressed: Wazi njani ukuba unoxinzelelo? – Messages for Mothers
Kuyinto eqhelekileyo ukuxhalaba ngeli xesha linzima le- COVID-19. Ngamanye amaxesha ukuxhalaba noxinzelelo okanye ukungababoni nje abanye abantu, kungakukhokhelela kuxinzelelo lwengqondo. Nazi ezinye izinto ekufuneka uzijonge:
Uziva uphantsi, unoxinzelelo lwengqondo okanye ulahlekelwe lithemba.
Uneengcinga ezingakhiyo ezikwenza uphazamiseke.
Uziva ungafuni kuthetha nabanye abantu nokuba ungabatsalela umnxeba okanye ubathumelele umyalezo nge-WhatsApp
Uziva ukuba awufuni kwenza izinto eziqhelekileyo obuqhele ukuzenza endlwini, njengokunxiba, ukucoca nokupheka
Uziva ukhathele lonke ixesha
Akukho nto ikunika lonwabo
Uneengcinga namacebo okuzilimaza okanye ukuzibulala
Ukuba unezi mpawu ngaphezu kweeveki ezimbini, nceda uthethe nomnye umntu.
Iminxeba yoncedo (qhubeka uzama, kungenzeka ukuba baxakekile)
IQela loXinzelelo lwengqondo nokuXhalaba loMzantsi Afrika [South African Depression and Anxiety Group (SADAG)] – ineminxeba yoncedo emininzi 0800 21 22 23 okanye 0800 456 789 okanye 0800 20 5026 kunye neminye.
Umnxeba woBomi ngokubanzi 0861 322 322 kunye noMnxeba wabo woNcedo lukaGawulayo 0800 012 322
Umnxeba wemiyalezo ye-Whatsapp we-SANCA weengxaki zoTywala neZiyobisi 076 535 1701
UMnxeba wabantwana 0800 055 555
← How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Die versorging van kinders as ŉ ouer COVID-19 het? → How should I deal with suicidal thoughts during COVID-19: Ngaba ndingamelana njani neengcinga zokuzibulala neziphazamisayo ngexesha le- COVID-19?